“Iska Joog Kooxdaada” – Luis Suarez Oo Ka Dalbaday Lautaro
Weeraryahanka reer Argentine ee Lautaro Martinez ayaa si isasoo taraysa loola xidhiidhinayaa Barcelona oo la sheegayo inay la xidhiidhay Inter Milan, una bandhigtay qorshe ay isku weydaarsanayaan ciyaartooyo iyo lacag oo u suurtogelin karaya inay gacanta ku dhigto 22 jirkan.
Lautaro oo 66 ciyaarood oo uu u saftay Inter Milan u dhaliyey 25 gool, ayaa xagaagan ah bartilmaameedka ugu horreeya ee Barcelona, si uu u beddelo Luis Suarez oo dhaawac culus soo gaadhay xilli ay da’diisu weynaatay oo uu 34 jir noqday, isla markaana Antoine Griezmann iyo Ousmane Dembele ay la qabsan waayeen.
Tababare Quique Setien iyo Madaxweyne Bartomeu ayaa u arka Lautaro inuu yahay laacibka ay kooxdoodu u baahan tahay inay hesho, waxaana sidaas oo kale u gacan haadiyey Lionel Messi iyo ciyaartoyda kale ee kooxda.
Sidaas oo ay tahay, xiddigii hore ee kooxaha Inter Milan iyo Barcelona ee Luis Suarez ayaa usoo jeediyey weeraryahanka reer Argentine ee Lautaro Martinez inuu iska joogo horyaalka waddanka Talyaaniga oo aanu u dhaqaaqin Barcelona.
Luis Suarez oo sannadkii 19960-kii ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or isaga oo ka tirsanaa Barcelona ayaa waxa uu sannad kaddib oo ku beegnayd 1961-kii go’aansaday inuu Camp Nou ka tago, waxaanu u wareegay Inter Milan.
“Haddii aan isaga ahaan lahaa, maan beddeleen kooxdayda.” Ayuu yidhi Suarez oo waraysi siiyey wargeyska La Gazzetta dello Sport.
Halyeygan hore waxa uu sheegay inay caqabo badan ka horreeyaan Lautaro Martinez haddii uu tago Barcelona, waxaanu yidhi: “Inaad go’aan ka qaadato inaad joogto ama aad tagto maaha wax aad u adag, inkasta oo haddii Messi uu soo wacay ay u fududaanayso inuu ka fikiro.
“Si kastaba, waxaynu ka hadlaynaa wiil aad u da’yar wali, waxaanu waqti kasta dunida ku waajahayaa caqabado mustaqbalka.
“Aynu runta sheegno, sumcadda uu ku yeelanayo Spain waxay ka yar tahay ta uu Inter ku leeyahay, waxaanan doonayaa in Lautaro aan siiyo waano – Joog halka aad ku sugan tahay.”